Goobaha Khadka Tooska ah ee Maltese - Xeerarka Koodhadhka Khadka Tooska ah ee Khadka
Loading ... Laga bilaabo Maarso 2018 dhammaan noocyada khamaarka waa ka sharci Malta. Maamulka Ciyaaraha Malta (MGA) waa hay'adda sharciyeynta ee mas'uulka ka ah maaraynta dhammaan khamaarka Malta. Waqtigaan la joogo dalka waxaa jira xulasho aad u tiro badan oo qamaar kala duwan ah: casinos, casinos Cruise, lotteries, hoolalka bingo, mashiinada ciyaarta iyo tartamada caadiga ah ee ciyaaraha xirfadaha.
Khamaarista online ee Malta
Khamaarka khadka tooska ah waa mid ka mid ah qeybaha ugu dhaqsaha badan ee ciyaaraha Malta, waxayna ku xiran tahay qodobada sharciyada ciyaaraha fog. Goobta ugu horreysa ee qamaarka internetka ee Malta waxaa la bilaabay 2000 waxayna ku hawlanayd sharadka isboortiga ee internetka. Bishii Abriil 2004, waddanku wuxuu soo galay qaab sharciyeed nidaaminaya dhammaan warshadaha ciyaaraha khadka tooska ah. Malta waxay ahayd xubintii ugu horreysay ee xubin ka ah Midowga Yurub, baaxadda si buuxda u nidaaminta khamaarka internetka. Tan darteed Malta waxay bilowday bixinta rukhsadaha bixiyeyaasha khadka tooska ah ee internetka ku dhowaad dhammaan noocyada khamaarka. Qaar ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha ugu caansan ee ku shaqeeya rukhsadda ciyaaraha ee Malta, oo ay ku jiraan Mr Green, Betsson, Bet-at -home, Interwetten.
Liiska Saacadaha 10 Maltese Online Casino
Boggaga internetka ee casino ayaa aqbalaya ciyaartoyda ka imaanaya Malta
Eeg liiska boggaga internetka ee casino ee aqbala ciyaartoy ka socota Malta, oo bixiya ciyaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Halkan waxaad ka heli doontaa madadaalo ballaadhan oo ka timaadda mashiinnada ciyaarta illaa ciyaaraha khamaarka oo ka nool kuwa iibiya barnaamijyada caanka ah sida NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, iyo kuwo kale oo badan.
Waxa kale oo aad akhriyi kartaa boggayaga internetka ee khadka casriga ah, si aad u ogaatid kor u qaadida internetka, gunnooyinka iyo fursadaha lacag bixinta ee laga heli karo ciyaartoyda ka socota Malta.
Qamaarka ku yaala Malta
Ciidaha Malta - waa dalxiisyo, kubbadda cagta, badda, barashada Ingiriisiga, iyo dabcan casino. Jasiirad yar oo qorax leh oo ku taal bartamaha badda Mediterranean-ka waxay noqotay oo keliya marinnada waddooyinka ganacsiga iyo kuwa diblomaasiyadeed, laakiin sidoo kale waxay ka mid tahay caasimadaha nolosha khamaarka ee Yurub. Aan is barano!
Malta - si kooban oo ku saabsan goobta iyo taariikhda;
Casinos dhulka ku yaala dalka hadda waa sharci;
Casinos ee ugu caansan dhulalka caanka ku ah Malta iyo sifooyinka:
Casinos online waa sharci dalka, waa mid aad loo jecel yahay. Malta waxay ku dhowdahay xarunta ugu weyn ee khadka tooska ah ee adduunka ee adduunka;
Shan goobood oo ah caasimadda Malta Valletta oo leh cinwaanno;
Goobta Malta iyo asalka taariikhda gaaban
Malta ama Jamhuuriyadda Malta - waa jasiirad ku taal Badda Dhexe, koonfurta Sicily, taas oo badanaa loo arko inay tahay Shard UK oo raaxo leh. Magaciisa quruxda badan gobolka wuxuu ka helay Foosiyaaniyiinta, luuqada ay malatadu u tarjunto "hoy".
In kasta oo aagga jasiiraddu yar tahay, haddana taariikh aad u la yaab leh oo hodan ah. Tanina la yaab ma leh, maxaa yeelay Malta waxay ku taal isgoyska waddooyinka Yurub iyo Afrika iyo Aasiya. Wali qarnigii VIII BC. e. Fiiniyaaniyiin iyo Gariig ayaa u yimid dhulkan. Qarniyaal, dhulku wuxuu u gudbay Carthaginians, Roomaan, Byzantines, Carab, Norman, Isbaanish, Ingriis. Xorriyadda buuxda ee waddanka Ingiriiska wuxuu helay kaliya 1964.
Caasimadda Malta waa Valetta, oo ay aasaaseen amarka Malta, waxaana loo magacaabay hogaamiyahooda Jean de La Valletta, si ay magaalada uga difaacaan Turki.
Maanta Malta waa jamhuuriyad baarlamaani ah oo ay madax ka tahay madaxweyne Marie Louise Coleiro Preca. Jagada raysal wasaaraha waxaa iska leh Joseph Muscat.
Jasiiradda qurxinta leh ayaa had iyo jeer martiqaad ah martida, dadka khamaarka ee xiiseynaya casino, maaha ka reeban.
Burburinta iyo khamaarka Malta
Malta waa mid ka mid ah meelaha loogu jecel yahay khamaarayaasha, safarka adduunka oo dhan. Weli! Si kastaba ha noqotee, aag yar oo kaliya 316 mitir laba jibbaaran. 4 kiiloomitir oo ujirta Casino weyn: Oracle Casino, Dragonara Casino, Casino di Venezia, Casino at Portomaso.
Guri kasta oo khamaar wuxuu leeyahay taariikh iyo hiddo u gaar ah. Mid run ah: casino kastaa waa goob fiican oo lagu ciyaaro Roulette, Blackjack, Caribbean Poker, Stud, Texas Hold'em, Saddex Card Poker, dhibic madhan, Faransiis ama elektiroonig elektaroonig ah iyo mashiinno badan oo naadi ah.
Malta waxaa loo oggol yahay inay ciyaarto 18 sano. Waxa kaliya ee ka reeban waa muwaadiniinta dalka laftiisa, kaas oo gelitaanka casino wuxuu ku furmayaa 25. Booqashada ugu horreysa ee martida hubso inaad weydiisato baasaboor, sidaas darteed waa lacag bixin si loola qabsado isaga.
Malteseku daacad ayey u yihiin koodhka labiska, haddaba nooca dharku waa caqli / caadi. Looma oggola oo keliya dharka dharka lagu maydho, iyo wixii ka dambeeya 20-00 - gaab iyo shaati furan iyo kabo. Laakiin xitaa martida oo labbisan oo aan qaab muuqaal ah ku jirin, gudaha ayaad geli kartaa, oo kugu filan inaad halkan ka kireysato jaakad iyo xarig. Waxaa xusid mudan in macaamiisha dharka fiidkii ah dhammaan casinos-yada Maltese ay bixiyaan gaadiid bilaash ah.
Meeshan waxaa sidoo kale loo yaqaan casino dimoqraadi ah. Waxay ku taal gacanka St Paul Bay ee woqooyiga jasiiradda waxay ka mid tahay Dhismaha Dalxiis ee loo yaqaan 'Dolmen Resort Complex 4 * - waa mid ka mid ah dhismooyinka hudheellada ugu wanaagsan dalka. Meelaha dimuqraadiga ah waa haddii ay dhacdo luminta khamaarka inay ka soo noqoto 10 illaa 20% qadarka.
Kani waa casinos-kii ugu horreeyay ee ka muuqday Malta, waxaa la furay 1964. Dhismuhu aad ayuu uga fac weyn yahay - waxaa la dhisay 1870. Markii hore, waxay ahayd degganaantii Emmanuel Scicluna, oo ah bangi. Dragonara Casino waxay ku taal bartamaha nolosha habeenkii, maxaa yeelay waxa ku jira St Julian.
Casino Tani waa mid cajiib ah laga bilaabo daqiiqadaha ugu horreeya ee dhismaha taariikhiga ah - qasriga kabtanka, oo ay dhisteen Knights of St. John 1685. Soo-booqdayaashu waxay ku raaxeysan karaan muuqaal qurux badan oo ku yaal Grand Harbor ama waxay ku dhex socon karaan wadada weyn ee Vittoriosa. Isku soo wada duuboo sedex dabaq waa mid gaar ah, gudaha gudaha meel gaar ah waxaa la siiyaa muraayada Murano, cajalado, qalab casri ah iyo alaab guri oo qaraami ah.
Casino Tani waa qayb ka mid ah dhismayaasha raaxada ee St. Julian, guryo raaxo leh iyo guryo 5-xiddig leh, makhaayad u gaar ah, hoteelka Hilton iyo xarumaha ganacsiga. Sidoo kale, markii xarunta quusitaanka ee casino.
Ciyaarta internetka ee Malta
Maxay dadku u jecel yihiin khamaarka Malta, sababtoo ah waxaa jira sharciyeyn qaawan oo internetka laga helo. Halkan, qof kastaa wuxuu heli karaa liisanka si uu u abuuro goob khamaar u gaar ah, laakiin daruuri maahan inay leedahay shirkad Malta leedahay. Dhammaan macaamillada lacageed waa in lagu qabtaa hawl wadeenka Malta.
Xorriyadani waxay sharraxaysaa sababta goobaha Maltese ee leh mishiinnada ciyaarta, roulette iyo kaararka ay aad uga badan yihiin kuwa kale. Amateurs waxay ku ciyaaraan lacag iyagoo aan ka bixin kombuyuutarkaaga, way farxi doonaan. Malta gudaheeda, waxaa damaanad qaaday sharci ahaan, raaxo iyo ammaan.
Dhab ahaan, Malta hadda waa xarun weyn oo casinos online ah ee dunida.
Qasriga Grand Master. Cinwaanka: Palace Square / Street Republic, Valletta. Qalcaddan waxay ku taal bartamaha La Valletta, waa wadnaha xarunta taariikhiga ah. Halkan waxaa degan hoyga baarlamaanka iyo madaxweynaha.
Kaniisadda Saint John. Goobta: Wadada St. Lucia's Street, Valletta. Dhismaha cathedral-ka, oo lagu dhisay amarka Jean de la Kassera wuxuu u egyahay qalcad. Dhismuhu wuxuu bilaabmay kadib Dagaalkii weynaa ee Malta. Hantida ugu weyn waa rinjiyeynta Caravaggio. Waa wax xiiso leh in la baaro dhagxaanta xabaalaha.
Madxafka Qadiimiga ah ee Qaranka. Cinwaanka: Triq Ir-Repubblika, Valletta. Si xiiso leh dhismaha madxafka - daar ku taal qarnigii 16aad Auberge de Provence iyo sidoo kale bandhig, halkaas oo ay ku jiraan waxyaabo laga helay xilligii Neolithic (5000 BC) iyo waxyaabo qiimo leh.
Matxafka Dagaalkii Qaranka. Goobta: St. Fort. Elmo, Valletta. Matxafka waxaa lagu hayaa baaruuddii hore ee baaruudda, si joogto ah filimaan taariikhi ah oo laga sameeyay badda Mediterranean. Malta waa sawirro gaar ah 1941-1943 sano, oo muujinaya jasiiradda oo burbursan.
Tiyaatarka Manoel. Cinwaanka: 115 Triq it-Teatru l-Antik, Valletta. Waa tiyaatarka ugu da'da weyn dalka, oo la dhisay qarnigii 18aad iyada oo lagu amrayo Grand Master Manoel de Vilho. Halkan waxaa lagu keydiyaa ururinta xirmooyinka, dharka iyo rinjiyeynta.
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Malta iyo Maltese
Malta malahan wabiyo iyo harooyin, iyo ilo kale oo biyo macaan ah. Dhamaan biyaha la cabo waa la soo dhoofiyaa.
Dalxiiska - waa mid ka mid ah tiirarka dhaqaalaha.
Raadinta gaadiidka bidix ee Malta.
Jasiiradda waxaa jira fal dambi ah.
Malta, waa wax aan suurtogal ahayn in la furo.
Jaamacadda Malta waa mid ka mid ah kuwa ugu da'da weyn caalamka, waxay la shaqeeyaan 1592.
Guryaha waxay ku yaalliin calaamado leh magacyada milkiilayaasha.
Inta u dhaxaysa Sicily iyo Malta 93 km, laakiin horay udhaxaydeen jasiiradaha ayaa ahaa buundo.
Malta on Map ee Europe
0.1 Khamaarista online ee Malta
0.2 Liiska Saacadaha 10 Maltese Online Casino
2.1 Boggaga internetka ee casino ayaa aqbalaya ciyaartoyda ka imaanaya Malta
3 Qamaarka ku yaala Malta
3.0.1 Goobta Malta iyo asalka taariikhda gaaban
3.1 Burburinta iyo khamaarka Malta
3.1.0.4 Kantaroolka Portomaso
3.2 Ciyaarta internetka ee Malta
3.2.1 Soojiidashada Valletta
3.2.2 Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Malta iyo Maltese
3.2.3 Malta on Map ee Europe
qalin lacag oo aan lahayn gunno